Eminyakeni yamuva, phakathi balimi ezweni lethu kuthandwa shredders engadini, esiza kakhulu inciphise doti esakha ngenxa umsebenzi engadini. Le nqubo akakabi zisakazekele kakhulu, ngakho-ke khetha imodeli engcono akulula. Namuhla, ezitolo ezikhethekile ungakwazi ukuthenga cishe noma yikuphi shredders engadini, okuyinto sizobona manje ukuxoxa ukubuyekezwa.
Ngokwawo ezidingekayo ukuze umsebenzi nsuku zonke?
Cishe zonke balimi uyavuma ukuthi lokhu kulungiselelwa kuyadingeka kuzo zonke endlini. Phela, kungakusiza nquma amagatsha emithi izithelo neziqu ukhula ezinzima. Izibuyekezo abonisa ukuthi imfucuza nepepper kuthatha hhayi kuphela isikhala kancane, kodwa futhi ingasetshenziswa njengendlela semboza ngabo izithombo zezihlahla noma umquba yamathebhu. Ngakho lesi sihloko sizobheka izici eziyinhloko lolu hlobo imishini, kanye inkulumo mayelana amathemba yangempela.
Namuhla kukhishwa shredders izinguqulo ezimbili: ne disc kanye Milling indlela. Ngamunye wabo kunezinzuzo zako kanye nebubi, esizokhuluma ngazo manje.
Esimweni sokuqala, njengoba inhlangano yokusebenza yenza ukushayela ukuze zazo riveted noma ashiselwe ungene izindwani. umsebenzi Speed incike uhlobo izinto zokusetshenziswa kusetshenzwe. Abalimi bathi amagatsha nomzimba omncane, amagxolo ukhula fresh zigaywa ngokuphazima kweso. abanikazi abanolwazi kungukuthi belulekwa ukuba ngelulele Amahlumela omile isiyingi grinders engadini: Izibuyekezo ukusho ukuthi imimese ngokushesha okukhulu tupyatsya.
ezicini ezinhle zinsizakuphila - maintainability futhi izindleko eliphansi inkinga. Amakhasimende bathi izindwani zingathengwa cishe njalo umkhiqizo ezikhethekile wezolimo, futhi izindleko zazo incane. Nokho, lezi shredders kakhulu engabizi ukuthi zinhlobo okuzokwenziwa ezichazwe ngezansi ngokwabo.
Kulokhu, ugaye isigayo isitshalo izinsalela, yakhelwe njengoba uhlobo igiya hardmetals. Lolu hlelo ezithembeke kakhulu, kusukela kulula kuphendukela ngisho amagatsha wawusomile ngenhloso ububanzi kufika ku 40-45 mm. Abathengi bathi ngisho willow ubudala is iguqulwe kalula lonke yinqwaba ukubola, okungase kusetshenziswe njengezaba semboza ngabo izithombo zezihlahla kakhulu.
Kodwa okuningi baziswa abalimi yethu kwesinye isakhiwo, ngakho ngokuvamile ukuthenga lezi shredders engadini. Izibuyekezo bathi wokusika kungaba amagatsha ngokuzimela some nezinye izinto ukulayishwa ku hopper: ungenayo engozini ithuluzi nezandla njalo baphokophelele imfucuza (njengoba kwaba njalo endabeni ka-disk izinhlelo).
bezihlahla ethile ukuthi kuyinto kabi uyakufanelekela ukuba ukugaya amahlamvu kanye namakhambi fresh. Ogorodniki abonisa ukuthi okukhiphayo kuyinto wokudla, inani elikhulu juice nokungcola exutshwe isitshalo izinsalela osugugile, ikhuthaza okusheshayo nemihuzuko indlela.
Lapha, kukhona izikimu ezimbili ngawo shredders engadini ekhiqizwa. Izibuyekezo ziyangqubuzana kakhulu: abanye ngonya esivuna injini kagesi, futhi abanye bakhetha a imodeli kaphethiloli. Njengoba kwezinye izimo eziningi, iqiniso amanga endaweni ethile phakathi.
Izimpawu izinhlobonhlobo kagesi
Cabangela izici ngamunye ine shredder engadini kagesi. Izibuyekezo ngakho kukhona ezahlukene kakhulu. Ngokungafani uphethiloli ezihlukile, onobuhle kulesi sigaba, kukhona version amateur nezobuchwepheshe. Kufanele aqaphele ukungabi nakwenzeka kwento operation okuqhubekayo of omunye umehluko obalulekile kakhulu kusuka izimbangi zabo. Yilokho (ubude kungenzeka umsebenzi) ihluke nomunye izinhlobo professional kanye yasekhaya. Ngokungafani likaphethiloli onobuhle, isikhathi lesi kunoma isiphi isimo abalwa kumaminithi.
Abalimi bathi ngisho grinders kagesi, Milling, uma ukulayisha ubukhulu isilinganiso Amahlumela ezomile, kabi ebilayo emva kwemizuzu 20-30 wokusebenza okuqhubekayo. Ngemva kwalokho, indlela kuyadingeka ukuze ngokushesha ayeke futhi kudambe.
Uma ufuna ukuthenga buyindlela kagesi, qiniseka ukuba banake imikhiqizo ephuma Bosch. Garden shredder, ezikhishwe emkhathini eJalimane, cishe ngeke sijabulise nawe linokwethenjelwa ngisho ezindaweni nokhahlo.
Abathengi bathi nge shredders enjalo usule yonke izingadi kanye ithuluzi wahlala tekusebenta. Lokhu shredder "Bosch" ivelele kusukela mncintiswano.
Yini enquma ukusetshenziswa amandla?
Kunezinhlobo ezintathu ejwayelekile Milling isinyathelo usayizi: 0,325 DM, DM 0,375 futhi 0,404 DM. Isinyathelo Ngaphezu kwalokho, namandla kakhulu injini, ngokushesha Ungasisika amagatsha ezomile futhi obukhulu. Nokho, isinyathelo ezincane - kungcono motor kangako, umthwalo wiring ezingamelana nezinselele evamile ezweni ngendlu. Yiqiniso, izindwani emikhulu futhi kudinga injini enamandla angaphezulu torquey, nakho kuholela umthwalo omkhulu wiring. Futhi emakhaya iningi suburban isimo ekahle alihlukile.
Abanikazi shredders enamandla ukuqaphela ukuthi ezimweni eziningi kuyadingeka ukushintsha ngokuphelele ithusi. Uma indlu inkulu, izindleko kungenzeka sokuboshwa izindleko nezinye amayunithi, ezingenakho nemibi enjalo. Ngokushesha, siphawula ukuthi intengo onobuhle ezingabizi kakhulu iqala nge ruble 6500.
Ukuze yini usebenzisa shredder engadini kagesi? Izibuyekezo abonisa ukuthi ukucutshungulwa yayo ithuluzi lokubhekana kuze kube ukhula ezinzima. Ngenxa injini ababuthakathaka kakhulu nemimese iDemo nikhulume ngento ezinkulu nakakhulu akudingekile.
Kancane mayelana nezici injini
Jwayelekile kagesi engadini shredder ingaqala kuze kufinyelele 2.5 amandla kW. Injini uvame esemgwaqweni eksisi eyinhloko yomculo. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukucutshungulwa lemiqulu emikhulu amagatsha ngempela kufanele kukhethwe indawo kuphela longitudinal. Kulokhu, ungayisebenzisi gearboxes eyinkimbinkimbi, okuyinto kakhulu kwandisa ukuphila service kokubili injini futhi lonke iyunithi iyonke.
Uma akubalulekile kangako, kuba imishini engadini kungadala kahle umlilo anawo izihlahla zezithelo kwasani izinsalela utshani kanye umoba ezinzima ukhula kusimo esinjalo.
Ngoba akubona kagesi , kubaluleke kakhulu ukulungisa efanele bezihlahla noma imimese (kuye ngokuthi imodeli). Uma izindwani kuthiwa ziba ngcono, uyomane pheqela, hhayi sandla le izitshalo kwasani. Uma ngobugebengu noma ngamabomu isuswe fuses ekhethekile, idivayisi izozama ukusebenza ngisho noma hit izinkuni kanzima kakhulu noma ucezu metal imimese. Ngenxa yalokho, injini umane eshile umnikazi budedengu Ungathenga shredder entsha, kwazise isiqinisekiso ngeke ukulungisa lokhu okudala ngokuphepha.
Yini amakhasimende uthi?
Ngokuvamile, cishe bonke abathengi bengakunaki imininingwane enjalo: imishini egcekeni nge ukugaya amagatsha amakhulu kungukuthi ithengiswe njengoba grinders ngokuvamile njengoba elula, eyenzelwe nokulahla utshani namaqabunga, ngokuphepha futhi bachithe konke ukuphila kwawo isevisi ngaphandle isidingo YILUPHI UHLOBO izilungiselelo eziyinkimbinkimbi nokwenza ushintsho.
Kukhona onobuhle lapho ukungezwani okunjalo kungashintshwa kuphela esebenzisa ukusonta futhi ukufakwa kokumqoka kuphela, bese kuba khona labo okuyinto anemisila Izilawuli mathupha. Nokho, ochwepheshe bathi ukusetshenziswa yokugcina kalungisiswa, ngoba hhayi kuphela bathambekele behluleka, kodwa indlela kwale divayisi ezingezwakali kakhulu.
Ngivumelana futhi balimi abavamile: kungcono esisodwa ukuze silungise nge ukusonta, kunalokho acele umaluju yokulungisa chopper "a elicibilikile" ezosetshenziswa ukulungisa izindwani. Isimanga siwukuthi kodwa ukuziphatha ezingezwakali anjalo ayewenza ngezinye izikhathi kuyahluka engadini shredder "Bosch", okuyinto izici nje ephelele.
Ngakho, izinzuzo amathuluzi kagesi for ukugawulwa izitshalo ezilahlwayo ezilandelayo:
Vele ukuxhuma ithuluzi kunethiwekhi, ke grinders amagatsha kungenziwa eziqhutshwa kagesi.
Asikho isidingo ulungise isilinganiso uphethiloli nowoyela.
Asikho isidingo ukuthenga amakhandlela nezinye izimpahla.
Kodwa ikakhulukazi abasebenzisi grinders kagesi bayakwazisa ukusebenza ethule zalamaqembu.I, kanye ukungabi khona iphunga uphethiloli qeda. Ngokuqondene Izibuyekezo ezingezinhle, abaningi ungathandi izintambo isandiso njalo acekelwa phansi.
Umsebenzisi izibuyekezo ithuluzi uphethiloli
Ngakho, kukhona iqembu balimi abakhetha likaphethiloli engadini shredder. Njengoba ama-agumenti, umphumela wazo inkululeko ephelele yalolu hlobo ithuluzi nezinyawo, ikhono lokusebenzisa ngisho owawusanda kumiswa cottage zokuhlala, lapho ngaleso komqondo nezinga lokukhula kwengane ingakamiswa olwenziwa ugesi.
"AmaViking" kuhle kakhulu (izibuyekezo) kwenzakala engadini shredder. Ngokusho amakhasimende anelisekile, lolu phiko kalula igedle amagatsha awugqinsi, izimpande zesihlahla nebhalsamu namagxolo, kuyilapho esiningi fuel esincane kakhulu.
Nokho, abathengi abaningi bayavuma ukuthi for uphethiloli wensimbi yakho sidinga ukunakekelwa njalo futhi ngokucophelela, ngoba akukho enjalo, ngokushesha ehluleka. Ingxenye enkulu izikhalazo uthukuthele ezihlobene yokuthi abantu bamane nje abanalo mbono ngisho mayelana Lubrication ofanele imishini basebenzisa ziphi izindlela.
Uzokhetha lamafutha - isihluthulelo imali yakho!
Ukumanzisa amathuluzi - omunye nezindaba ezibuhlungu kakhulu futhi baqonde izinto ezenzekayo ukuthi nakanjani ngeke ukwazi ukubhekana nanoma yisiphi shredder likaphethiloli yomsebenzisi, okuyinto ifakwe ezimbili-unhlangothi injini. Ekuqaleni kungase kubonakale sengathi alikho inkinga yangempela lapha akukhona njengoba kuqabukela kutholakale umuntu owakha azisetshenziswa ekukhishweni eziningi ezihlukahlukene zokugcoba esikhethekile mshini wakhe.
Yilokho nje ukuze uthole kubo ayikho indawo, bese ukhokha ambalwa ngenguqulo umfuma wamafutha Ngeke ukwazi ukukhokhela hhayi bonke abathengi ezingaba khona. Ngenxa yalokho, ngokuvamile esisuke kunezimo lapho uphethiloli chopper engadini sihlushwa bathele etholakalayo amafutha engine lokuqala. Ngokuvamile emva leli thuluzi yehluleka, yesiqinisekiso akuyona zimo.
Yiqiniso, lapho bakwazi ukuncoma ekuhambisaneni kuphela ufunde imiyalelo kamakhi. Okokuqala, kutuswa igrisi ekahle chopper yakho bese uthola uyaphika inkonzo ngesisekelo operation engalungile ngeke bakwazi.
Nokho, uma eliseduze sesevisi itholakala kude nawe, futhi ukuba basebenzise amasevisi ayo ungafuni ukuba, phela ke akudingekile ukuba uthele kwesigubhu uwoyela okuyinto uwoyela wawa. Ikakhulukazi, amamodeli yasekhaya sikhuthazele impela ejwayelekile amafutha M8, engatholwa ngasiphi garaji. Kodwa okuhle nakakhulu wukuthi ukusebenzisa ezihlukahlukene ukudluliswa, ngaphandle viscosity anda.
Izakhamuzi eziningi ehlobo, okwase kuphele iminyaka engu eziningana zilandelana wahlinzwa ezimbili unhlangothi likaphethiloli engadini shredder utshani ku zokugcoba ezishibhile, ukuwohloka olukhethekile yokusebenza impahla yayo ungazange wakuphawula.
Kodwa kukhona labo bantu namanje ukuthola imbangela elibanjwa. Iqiniso ukuthi amagiya kwezinye izingxenye ezihambayo shredders likaphethiloli kudingeka ube high Lubrication njalo. Njengoba umthetho, ngokuba lokhu, futhi, usebenzisa eshibhe izinhlobo zawo, okuyiwona-ke ukhokhe. abanikazi okunjalo engongi ngokuvamile esekhala engiwukhumbulayo owawungemnandi "iphunga isitoreji petroleum emadepho" engadini yakhe.
Ukuze ugweme nemiphumela ebuhlungu ezinjalo namanje awunayo imali esikhululekile ukuthenga uwoyela okubolayo for Lubrication. Yebo, okubiza kakhulu, kodwa musa ukuhogela. Futhi, akudingeki cabanga imvelo, ngoba lolu hlobo uwoyela ngesikhathi esifushane ahlahlele zibe izakhi zalo abalekeleli ngaphandle ulimaza engadini yakho, ingadi noma ihlathi.
Ungahlangana izimpendulo eziningi siyathukuthela abathengi amafutha imvelo. Bayakhononda ukuthi amathuluzi abo emva isitoreji ebusika zambozwa nokugqwala, okuyinto endabeni ukusetshenziswa zokugcoba ezivamile kungukuthi uyalandelwa.
Kunengqondo ukuba axwayise ngokuthi ngaphambi kokufaka insimbi phezu isitoreji eside liyadingeka ugcwalise ukudluliswa evamile noma injini zokwenziwa uwoyela. Ngemva kwalokhu, uthathe kancane "drive" igiya ngesikhathi lutho. Iqiniso lokuthi ukubola amafutha ahlanzekile imvelo futhi izoqhubeka ngesikhathi isitoreji, okuholela ingxenye sangaphakathi umshini kusheshe okumelwe sinikelwe engenamsebenzi.
Ungakhohlwa ukuthi igrisi idinga hhayi kuphela ngommese noma wokusika, kodwa idrayivu sprocket. Kungaba zimanziswe nge amafutha noma lithologic ezivamile, kodwa ukwenza lokho kumane nje ezimweni ezibucayi. Kungcono ukusebenzisa le njongo ngokukhethekile grade zokugcoba. Labo balimi ngubani njalo banakekele chopper kwezinye izinkinga nalo ungenawo akhononde.
isitoreji Proper - isiqinisekiso impilo!
Kusukela kulokhu okungenhla sisuke "unikezwa mfana" wesitoreji, ukukhuluma kancane ngakho. Njengomthetho, amandla uya okusetshenziselwa umsebenzi ngezikhathi ezithile zonyaka, kodwa lonke ebusika ukulithola ekuqineni izikhathi ezimbalwa. Njengoba sishilo kakade, ngaphambi ebeka chopper "ekamelweni" kubalulekile ukuba gcoba, engashiyi uwoyela.
Abaningi izakhamuzi zethu nabo akuzona ebucayi kakhulu mayelana nale nqubo, okuholela mass izikhalazo, okuyinto abazinikele "izinga ezinjengendle" ka shredders yayo engadini. Vele uthi ukuthi ezimweni eziningi, sisole balimi ngeshwa, abangawazi ngisho cabanga ithuluzi nokongiwa ngoba inkathi ebusika.
Ukuze wenze lokhu, ukhipha ikhava zokuzivikela, susa konke izintuli nokungcola. Susa ikhaba, lapho phakathi isitoreji kuyatuseka ukwehlisa amafutha engine. Yiqiniso, ungavele aligcobhoze e amafutha ngeqholo elenga odongeni, kodwa ukulondolozwa efanele akukhetha: metal uhlala ahlanzekile ngokuphelele futhi evikelwe ngokuphelele ngokumelene ukugqwala. Abalimi abanokuhlangenwe nakho bathi imimese ezisele for the chopper, ukuze kugcinwe zisesimweni ephelele, ngisho iminyaka emithathu emva kokuthenga.
Sula nge indwangu ethambile zonke evele umsebenzi, ususe zonke nokungcola kusuka izingxenye. Gcoba bonke zidinga ukuthi timphawu tesakhiwo (ukubheka imiyalelo yabo onesimo). Ungabese mpahla Insimbi isisitho selanga endlini eceleni endaweni ethile ekhoneni ngaphambi kokuqala kwesizini entsha.
Ezinye amazwana isitoreji grinders kagesi
Gcina zonke izigaba amathuluzi amandla kungaba ngokwanele efudumele, endaweni umoya. Akwamukelekile ukugcina amadivaysi emigwaqweni, lapho ngenxa diurnal lokushisa gradients ngaphakathi kubo ukufingqa, ekugcineni okuholela short circuit futhi ukulimala ithuluzi.
Kodwa akudingeki ukuba balwe: isitoreji at okushisa ngenhla degrees 50 Celsius okuhle ngeke. Nokho, singazi ahlala e-Afrika, ukukhathazeka ngakho nje hhayi zinkulu. Uma uthenge chopper ibhethri, singazi ukweluleka wena ukugcina amabhethri yakhe at okushisa ngezansi 10 nangaphezulu degrees 35 Celsius, ngakho-ke ngokushesha kakhulu kungaholela ukwehluleka kwabo. Uma sicabangela izindleko, lokhu kushonelwa uyise kuyoba ezingemnandi neze.
By the way, kangakanani kuyinto shredder engadini? Intengo imifanekiso ezivamile kagesi eziqala ayizinkulungwane 6-7, kodwa ezahlukeneyo likaphethiloli uzokwazi ukuthenga ruble okungenani eziyinkulungwane 15-17.
Izinzuzo eziyinhloko kanye nokungalungile kwe-mulina yi- "Gamma"